Qiimaha ugu qaalisan ee sanadka 2021. Waa maxay lacagta ugu qaalisan?
Sannadka 10aad ee ugu qaalisan oo qiimaha qaaliga ah ee qiimaha sicirada lacagta ah ee lacagta doollarka ah ee doolarka Maraykanka (USD) hadda.
Ugu sareeya lacagta ugu kharashka badan 04/03/2021
42-coin (42) 179 739 $
Unisocks (SOCKS) 147 096 $
Punk (PUNK) 145 857 $
3X Long Bitcoin Token (BULL) 67 556 $
3X Long Cardano Token (ADABULL) 52 447 $
tBTC (TBTC) 52 346 $
PieDAO BTC++ (BTC++) 52 200 $
RSK Smart Bitcoin (RSKSMARTBITCOIN) 51 785 $
Huobi BTC (HBTC) 51 497 $
pTokens BTC (PBTC) 51 389 $
Lacagta ugu qaalisan ee loo yaqaan 'lacagta digital' 'waa adeegga loo yaqaan' cryptoratesxe.com 'oo muujinaya lacagaha ugu sarreeya ee loo yaqaan' aaladaha lacagta 'oo leh ugu badnaan hal qaddar seddexdii bilood ee la soo dhaafay.
Adeegga tooska ah ee internetka "midka ugu qaalisan" lacagta digital "wuxuu adeegsadaa ilo furan oo laga helo isweydaarsiga lacagta digital wuxuuna isku daraa qiimeynta crypto-ka ugu qaalisan waqtiga dhabta ah.
Qiimaha lacagta digital qaali ah waxaa loo tixgeliyaa hal qadaadiic ah. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu kala saaro qiimaha lacagta qadaadiicda ah ee lacagta kaashka ah ee loo yaqaan 'lacagta digital i.e.' qiimaha guud ee dhammaan lacagaha 'aaladaha lacagta' ee ay soo saartaan lacagtaan.
Wadarta qiimaha ama qadarka lacagta qadaadiicda oo dhan waxaa muujiyey adeeg degel kale Qalabka suuqa aaladaha lacagta .
Liiska waxyaabaha ugu qaalisan ee loo yaqaan 'aaladaha lacagta' si joogto ah ayey isu beddelayaan, maxaa yeelay ganacsiga crypto ayaa socda, oo heerka sarrifka lacagaha 'lacagta digital' ayaa sii kordhaya ama hoos u dhacaya.
Adeegso adeegga "ugu qaalisan" crypto iyo khadka tooska ah.
Aaladaha lacagta ugu qaalisan maanta 04/03/2021 waxaa metelaya xulasho 10 crypto ah oo kala soocaya kuwa ugu qaalisan ilaa kuwa qaaliga ah, ee hoos udhaca qiimaha.
Qiimaha sare ee crypto waxaa lagu soo bandhigay doollar si loo fududeeyo isbarbardhiga.
Qiimaynta lacagaha ugu qaalisan ee loo yaqaan 'aaladaha lacagta' ayaa la soo bandhigay maanta 04/03/2021, laakiin sicirka si joogto ah ayaa loola socdaa.
Way iska cadahay in berrito la soo bandhigi doono lacagaha ugu qaalisan ee aaladaha lacagta ee berri.
Soo booqo bartayada internetka oo adeegso adeegga aaladaha lacagta ugu qaalisan maanta.
Lacagta ugu qaalisan ee loo yaqaan 'lacagta digital' ee 2021
Kuwa ugu qaalisan lacagta digital ee 2021 waa adeeggeena tooska ah ee tooska ah ee tooska u tuseysa meelaha ugu qaalisan aaladaha lacagta for 2021.
Xulashada crypto-qaali qaali ah ayaa galay 2021, laakiin waxaan qiimeyneynaa 3-dii bilood ee la soo dhaafay sarrifka. Qiimaha iyo firfircoonaanta isbeddelka ayaa isbeddelaya maalin kasta sidaa daraadeedna qiimeynteena sare "Qalabka suuqa aaladaha lacagta 2021" ayaa is beddeli kara maalin kasta.
Aaladaha lacagta oo leh qiimaha ugu badan.
Aaladaha lacagta oo leh qiimaha ugu badan - qiimeyntayada loogu talagalay qiimeynta qiimaha qadaadiicda lacagta digital. Qadaadiic waa hal unug oo caadi ah oo loo xisaabiyo. Way iska cadahay inaad bixin karto iyo saamiga lacagta qadaadiicda ah.
Sidaa daraadeed, qiimeynta aaladaha lacagta oo leh qiime ugu badan waa mid shuruudaysan.
Marka lagu daro qiimaha lacagta digital, waxay u qalantaa tixgelinta tirada qadaadiicda iyo wadarta guud ee lacagta qadaadiicda iyo xaddigeeda, i.e. lacagta digital capitalization.
Qiimaha loo yaqaan 'crypto' waxaa lagu qiyaasaa marka loo eego dollarka Mareykanka. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad isbarbar dhigto cryptos kala duwan qiimaha ugu sarreeya ee qadaadiicda ah.
Shaxda kuwa ugu qaalisan aaladaha lacagta.
Shaxda kuwa ugu qaalisan aaladaha lacagta - iyagoo muuqaal ahaan u soo bandhigaya qiimeynteena sare ee aaladaha lacagta ugu qaalisan.
Miiska shaxda ugu qaalisan waxaad ku arki kartaa magaca lacagta digital iyo sarrifkiisa lacagaha doolarka Mareykanka ah.
Markaad gujiso mid ka mid ah kuwa ugu qaalisan ee loo yaqaan 'aaladaha lacagta' ee shaxda, waxaa lagu geyn doonaa bogga macluumaad faahfaahsan ee sicirka this crypto.
Shaxda ugu qaalisan ee lacagta digital.
Shaxda ugu qaalisan ee loo yaqaan 'lacagta digital chart' waa qalab kale oo bilaash ah oo internetka ah oo soo bandhigaya darajada ugu sarreysa ee aaladaha lacagta ugu qaalisan.
Shaxanka qaaliga ah ee aaladaha lacagta wuxuu soo bandhigayaa qiimaha 10ka sare ee ugu sarreeya qiimaha ugu sarreeya.